Home News Faahfaahino kasoo baxaya israsaaseeyn ka dhacday Muqdisho
Faahfaahino kasoo baxaya israsaaseeyn ka dhacday Muqdisho
Israsaaseyn culus ayaa ka socota Isgoyska Tarabunka ee degmada Hodan ee Magaalada Muqdisho sidda ay warbaahinta u xaqiijiyeen goobjoogayaal.
Ganacsade ku sugan goob ganacsi ku taalla Agagaarka Tarabuunka ayaa warbaahinta u sheegay in ay dagaallamayaan Ciidamo hubeysan.
Ciidanka dagaallamaya ayaa qaarkood waxa ay yihiin ciidanka Booliska ee ku sugnaa Isgoyska ,haddana lama xaqiijinkaro waxyaabaha dagaalka keenay.
Lama ogga Kooxda hubeysan ee la dagaallameysaa Ciidanka Booliska ee ku sugnaa Isgoyska Tarabuunka.
Previous articleshir muhiim ah oo ka soconaya Magaalada Muqdisho
Next articleCiidamada Eriteriya oo la shaaciyay xiliga ay iman doonaan Muqdisho (Xog Muhiim ah)
Halima Aden reveals regret over representation of hijab in fashion shoots:...